မြရွက်ဝေ: ဂျပန်စာ ဂျပန်စကား
Posted by မြရွက်ဝေ at 9:03 PM
ပို့စ်အရှည်ကြီးကို စိတ်ပါဝင်စားစရာလေးဖြစ်အောင် ရေးတတ်ပါပေ့ညီမရေ.
မမကတော့ ပို့စ်တွေရေးရမှာ အရမ်းပျင်းနေတာ.
ညီမလေးရေးထားတာလေးတွေဖတ်ပြီး ကိုယ်ရေးထားတာတွေက ယောင်ဝါးဝါးပို့စ်တွေ ဖြစ်နေပါပေါ့လား။း)
ပို့စ် ၃ ခုကို အချိန်ယူပြီး အေးဆေးဖတ်သွားပြီ။
စာမေးပွဲလည်းအောင်ပါစေ..အိမ်ကြီးရှင်ဆီကလည်း ဆုရပါစေ... ဒီတခါ GUCCI , COACH Bag ပေါ့။သုံးရမယ့်သူ ညီမလေးပဲ ရှိတာ.. သုံးသာသုံး။း)
ဒါနဲ့ မမပိတ်ရက်တွေမှာ ညီမလေးကိုသတိရနေပါတယ်.
ကီမိုနိုဝယ်သွားချင်သေးလား။သွားချင်ရင် မပြန်ခင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ ဖုန်းဆက်ရင်ဆက်၊မေးလ်ပို့ရင်ပို့နော်။အစ်မတို့ ၃ လပိုင်းကုန်ဆိုပြန်မယ် ညီမရေ။မပြန်ခင် ၁ခေါက်လောက်တော့ ဆုံချင်ပါသေးတယ်။
ခု အောင်စာရင်းမထွက်သေးဘူးပေါ့.. အောင်ပါစေမမရယ်.. အမှတ်အများကြီး ရပါစေ နေ့အိပ်မက်တော့ လယ်ဗယ် ၁ မပြောနဲ့ ၂တောင် ဖြေဖို့ တော်တော်စဉ်းစားနေရတော့ ဘာနဲ့ကျောင်းပြီးထားလဲ လာမေးရင် ဖြေရမှာတောင်ရှက်တယ်.. :(
ညီမလေးရေ.. စာမေးပွဲ အောင်ပါစေ.. လို့ ဆုတောင်းပေးမယ်နော်.. :)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာလုပ်ဖြစ်တာတော့ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့.. အဲဒါ အမြတ်ပဲလေ.. အမဆို ဂျပန်စာအုပ် မကိုင်ဖြစ်တာ ကြာလှပေါ့.. ရှေ့လျှောက်လည်း ဂျပန်စာအုပ်ကို ကိုင်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး.. :P အိမ်ကြီးရှင်ဆီက လက်ဆောင်တောင်းဖို့သာ စဉ်းစားထားနော်.. :D
မဝါ---> ညီမပို့စ်တွေလဲ ယောင်ဝါးဝါးတွေပါ အမရယ်။ အမက ချစ်သောမျက်စိနဲ့ ဖတ်လို့နေမှာ။ ဆုကတော့ ဘာလိုချင်မှန်း ခုထိ ကိုယ့်ဘာသာလဲ မသိသေးဘူး။ :D
ညီမနေ့အိပ်မက်---> အောင်စာရင်းက Febလလယ်မှ သိရမှာပါ။ အမှတ်အများကြီးထက် အောင်ရင်တော်ပါပြီ။ ဘာနဲ့ကျောင်းပြီးလာသလဲလို့ အဆူခံရရင် အတူတူဘဲ ညီမရေ။ ကျောင်းကစာတွေ ဘာမှမသိတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ အလုပ်ပြန်လျှောက်ရင်တောင် ရမှာမဟုတ်ဘူး။
မနုစံ---> ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေအမရေ။ အမသမီးလေး စာသင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် အတူစာလုပ်ဖို့ အဖော်ရမှာပါ။ ညီမအသိ ဖိလစ်ပိုင် အမကြီးလဲ သူ့သမီးနဲ့အတူ စာလုပ်ရင်း လယ်ဗယ်၂အောင်သွားတယ်။
အောင်ရင် ဆုပေးပါ မအောင်ရင်တော့ အားပေးပါ ဆိုတာ သဘောအကျဆုံးပဲ
စာဆို စာကလေးတောင် မမြင်ချင်တာ။
can u tell me,where can i
Learn Japanese in yangon ?
သောကြာ ကြယ် said...
THINMYANMAR LANGUAGE CENTER
No.164, Room 2D, 1st Floor, Left
Bargayar Road, Sanchaung,
Tel (95-1) 504834, 535499
ဂျပန်စာကို win japanese language school ကလွဲပြီး မတတ်ဖူးပါဘူး။
အဲ့ကျောင်းက တခြားတွေနဲ့စာရင် စာသင်သက်ကြာတဲ့အတွက် သင်ကြားပေးတဲ့စနစ်ကောင်းပါတယ်။
စာအုပ်တွေ သေချာပြုစုပေးထားတဲ့အတွက် လေ့လာရ လွယ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေလဲ အဲဒီမှာ အတန်းတက်တာ/မတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘဲ ဝယ်ယူလို့ရတယ်။ တခြားကျောင်းတွေ သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သင်ပေးလဲဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။